रुकुम पूर्वमा महिलाको रहस्यमय मृत्यु, माओवादीका तीन नेता पक्राउ — Sanchar Kendra
रुकुम पूर्वमा महिलाको रहस्यमय मृत्यु, माओवादीका तीन नेता पक्राउ
सोमबार जिल्लाको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका–११, तल्लोसेराकी ३८ वर्षीया दुथी बुढा मगरको शव स्थानीय जंगलमा फेला परेको थियो ।
गाउँबाट १९ वैशाखदेखि हराएकी उनको २६ वैशाखमा शव भेटिएपछि माओवादी केन्द्रका नेता तथा वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष जयकुमार बुढा, उनका भाइ अर्जुन बुढा र माओवादीबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार कुमार सिंह पक्राउ परेका छन् ।
उनीहरुसहितका व्यक्तिले हत्या गरेको दाबीसहित जाहेरी परेपछि तीन जनालाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुकुम पूर्वका प्रमुख डीएसपी प्रकाश डाँगीले बताए ।
जाहेरीका आधारमा तीन जनालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान थाले पनि हालसम्म महिलाको मृत्युको कारण चाहिँ खुलिसकेको छैन । पोष्टमार्टमका लागि मगरको शव बुटवल लगिएको छ ।
‘पोष्टमार्टमबाट मृत्युको कारण खुलेपछि थप अनुसन्धान अघि बढ्छ’ डाँगीले भने, ‘अहिलेलाई प्रारम्भिक सोधपुछ गरिरहेका छौं ।’
प्रहरीका अनुसार जंगलमा भेटिएको मगरको शवमा आँखामा निलडाम देखिएको छ, त्यसले मगरमाथि लछारपछार भएको हुनसक्ने संकेत दिएको अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् ।
प्रारम्भिक जाँचबुझमा थप गम्भीर चोटपटक देखिएको छैन । ‘पोष्टमार्टमको प्रतिवेदनले जे देखाउँछ, त्यही अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउँछौं’ डाँगी भन्छन् ।
स्थानीयका अनुसार १९ वैशाखको साँझ माओवादी र एमालेको चुनाव प्रचार टोलीबीच बजारमा जम्काभेट भएको थियो । त्यहीक्रममा एकजनाले ढुंगा हानेपछि दुईपक्षबीच झडप भएको थियो ।
घटनाबारे थाहा पाएलगत्तै प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको थियो र दुवै पक्षलाई तितरबितर पारेको थियो । गाउँपालिकामा माओवादीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन छ ।
घटना भएको भोलिपल्ट दुवै पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुकुम पूर्वमा पाँच जना हराएको भन्दै निवेदन दिएको डाँगी बताउँछन् ।
‘त्यो दिन पानी परेकाले टेलिफोनको टावर पनि थिएन, भोलिपल्टसम्म चार जना भेटिनुभयो’ उनले भने, ‘एकजना चाहिँ नभेटिएपछि खोजी गरिरहेका थियौं ।’
‘अपराध’मा राजनीतिक रङ
हुन त महिलाको मृत्युको कारण खुलिसकेको छैन र उनको राजनीतिक आवद्धता पनि खुलेको छैन । तर चुनावको मुखमा भएका घटनाले राजनीतिक रंग पाइसकेको छ ।
मंगलबार एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरेर घरदैलो कार्यक्रममा सहभागी नेकपा (एमाले) को महिला कार्यकर्ता मगरलाई अपहरण गरी बेपत्ता र एकहप्ता बन्धक बनाएर क्रुरतापूर्वक हत्या गरेको दाबी गरेका छन् ।
‘शारीरिक र मानसिक यातना दिई क्रुरतापूर्वक हत्या गरेकाले उक्त घटनाको घोर भत्र्सना गर्दै दोषीमाथि अविलम्ब कानूनी कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दछौं’ पोखरेलले भनेका छन् ।
एमालेको रुकुम पूर्व जिल्ला इन्चार्ज खेममान खड्काले पनि माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताको संलग्नतामा महिलाको अपहरण भएको र हत्या गरिएको शंका आफूहरुलाई रहेको दाबी गरे ।
एमालेले मृतक महिलालाई माओवादीले अपहरण गरेर हत्या गरेको आरोप लगाइरहँदा माओवादी केन्द्रले भने एमाले नियन्त्रणमा रहँदा नै ती महिलाको मृत्य भएको दाबी गरेको छ ।
माओवादी जिल्ला इन्चार्ज ओली झडप हुँदा भाइको चिन्ता गरेर ती महिला पनि आएको र उनी दमको बिरामी समेत भएकाले बेहोस भएर लडेका बेला एमालेले उनलाई लिएर गएको दाबी गरे ।
के भन्छन हिमलाल आचार्य, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ?
हराएको भनेपछि आउनुहुन्छ कि भन्ने भयो । उहाँ नआइसकेपछि प्रहरीले खोजी गर्‍यो । हराएकामध्ये अरु भेटिएका थिए । उहाँ नआएपछि प्रहरी परिचालन गरेर खोजतलास भयो ।
त्यही समयमा तीन दिन टेलिफोनको नेटवर्क पुरै ठप्प भयो । प्रहरीको सेटले पनि काम नगर्ने अवस्था थियो । त्यही कारण सबै यथार्थ जानकारी लिन पनि सकिएन । २४ गते राति जंगलमा बत्ती बलेको सूचना आयो, भोलिपल्ट बिहान जाँदा शव प्राप्त भएको हो ।